Jowhar.com - Somali news Leader - News: Ra'iisal Wasaaraha oo u aqonsatay 27 August Maalinta Xuquuqal Insaanka Soomaaliya (Daawo Sawirro)
March 09 2014 19:28:14
Ra'iisal Wasaaraha oo u aqonsatay 27 August Maalinta Xuquuqal Insaanka Soomaaliya (Daawo Sawirro)
Ra'iisal Wasaaraha Xukuumada Faderaaliga ah Cabdi Faarax Shirdon "Saacid" ayaa maanta u aqoonsaday Maalinta Xuquuqal Insaanka Soomaaliya kadib markii ay Goloha Wasiiradu ansiyeen qorshaha geedi socodka xuquuqal insaanka dalka. Qorshahan ayaa loo soo bandhigay dawladda si wax looga qabto xadgudubyada ka dhaca dalka gudihiisa. Waxaa loo soo bandhigiay dawladda ka dib markii ay mudo ka soo shaqaynayeen xubno ka tirsan dawladda, baarlamaanka iyo ururada bulshada.
Ra'iisal Wasaaraha ayaa sheegay in qorshahani udub dhexaad u yahay barnaamijka dawladdu ay ku difaacayso kuna hormarumarinayso xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed. Waxaa kaloo uu tibaaxay in uu yahay mid qeexaya masuuliyada dhinacyada kala duwan ee ku lug leh horumarinta xuquuqda aas aasigaa ee muwaadinka.
"Maanta waxaan u aqoonsanay inay tahay maalinta xuquuqal insaanka Soomaaliya. Dawladdu waa ay taabo galinaysaa qorshahan dalka oo dhan. Waa mid aan qaadanay oo aan sii balaarin doono gaarsiina doono dalka oo dhan," ayuu yiri Ra'iisal Wasaaruhu.
Ra'iisal Wasaaraha ayaa dhanka kale tibaaxay tilaabooyinka ay dawladdu u hirgalisay dhanka hiigsiga sugida xuquuqda muwaadiniinta sida kuwa la xariira ka qeyb-galka siyaasada ee dumarka iyo qabiilada laga tiro badan yahay.
Uqaabilsanaha Arrimaha Xuquuqal Insaanka Soomaaliya, Dr. Shamsul Bari oo ka hadlay munaasabadii daah-furka qorshaha xuquuqal insaanka ayaa sheegay in Soomaaliya ay horumar la taaban karo ka gaartay dhawrista xuquuqal insaanka. Waxaana uu intaas ku daray inay cadahay in dawladda Soomaaliya muujisay masuuliyad dheeri ah ayna iska xil-qaantay dhawrista xuquuqada muwaadiniinta Soomaaliyeed.
"Is-badal weyn ayaa ka dhacay Soomaaliya shantii sano ee la soo dhaafay. Waxaa nasiib wanaag ah in rajada dalku soo raynayso Soomaaliyana ay tusaale u tahay caalamka intiisa kale markay noqoto dib-u-dhiska qaranka ayadoo dareensa masuuliyada ka saaran dhawrista xuquuqal insaanka," ayuu yiri Shamsul Bari oo intaas ku daray inay muuqato in dawladda Soomaaliya ka go'antahay fulinta dawlad wanaaga iyo hirgalinta sharciga.
Wasiirka Cadaalada mudane Cabdullahi Nuur Abyan ayaa sheegay in dawladdu masuul ka tahay illaalinta xuquuqda muqaadiniinta sida ku cad shuruucda dalka iyo diinta Islaamka oo si balaaran u qeexday xuquuqda rasmiga ah ee shaqsigu leeyahay. Waxaa sidoo kale wasiirku sheegay in dawladdu dib-u-habayn buuxda ku samaynayso laamaha cadaalada si waafaqsan caalamka.
Ugu dambayntii, Ra'iisal Wasaaraha ayaa bilad sharaf gudoonsiiyay dhawr masuul oo dadaal dheeri ah u galay difaaca xuquuqal insaanka Soomaaliya. Masuuliyiintaas waxaa kamid ahaa: Dr. Shamsul Bari, uqaabilsanaha arrimaha xuquuqal insaanka Soomaaliya; Dr. Miranda Ruth Brown, Madaxa Bariga iyo Kuurta Africa, Waaxda Labaad ee Xafiiska Masuulka ugu sareeya Arrimaha Xuquuqal Insaanka; Al Hajj Idrissa Aumar Kane, Agaasimaha Bariga afrika ee isla xafiiskaas, iyo Danjire Yusuf Maxamed Ismaaciil "Bari-Bari" oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya Geneva ahna wakiilka Soomaaliya ee Qaramada Midoobay ee fadhigeeda Switzerland.
0 Comments · 1956 Reads
jowhar.com4,299,801 unique visits